Tonizia · Janoary, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Tonizia · Janoary, 2012
Tantara mikasika ny Tonizia tamin'ny Janoary, 2012
Eoropa Andrefana26 Janoary 2012
Nandritry ny alin'ny 2 Novambra 2011 dia nisy nanafika tamin'ny alalan'ny solika napoaka [en] ny birao foiben'ny orinasa mpamoaka gazety mpandrabiraby mivoaka isan-kerinandro antsoina hoe Charlie Hebdo ao Paris ka may ravan'ny afo. Ny andro namoahan'ilay gazety Frantsay mpiseho isan-kerinandro an'ilay kisarisary maka endrik'ilay mpaminany antsoina hoe Muhammad ho toy...
Fahalalahàna miteny22 Janoary 2012
Amin'ny fiandohan'ny Febroary, ny Masoivoho Toniziana misahana ny Aterineto dia hanao fampakarana amin'ny Fitsarana Ambony ny didy navoakan'ny fitsarana iray tao Tunis tamin'ny May 2011 nandidy ny masoivoho mba hanakana ny fidirana amin'ireo votoaty miresaka vetaveta ao amin'ny aterineto. Ho an'ireo Toniziana mpiondana aterineto, sy ireo mafàna fo mpiaro ny...
Fahalalahàna miteny04 Janoary 2012
Fahavalon'ny fahalalahana maneho hevitra ny filoha Toniziana teo aloha Zeine El Abidine Ben Ali. Noho ny tetikadiny mavesa-danja, niezaka nanampim-bava ireo rehetra tsy mitovy hevitra aminy foana ny fitondrany. Betsaka ny fandaniana nataon'ny Sampan-draharaha Toniziana misahana ny Aterineto (fantatra amin'ny fanafohezan-teny hoe ATI) mikasika ny sivana atao amin'ny aterineto, eo...
Fifidianana03 Janoary 2012